Fahadisoana lehibe 5 hialana amin'ny automatisation marketing | Martech Zone
Marketing automation dia teknolojia mahery vaika matanjaka izay nanova ny fomba fanaovana varotra nomerika ny orinasa. Mampitombo ny fahombiazan'ny varotra izany ary mampihena ny overheads mifandraika amin'ny alàlan'ny mandeha ho azy ny fizotry ny varotra miverina sy ny marketing. Ny orinasan'ny habe rehetra dia afaka mandray tombony amin'ny automatisation marketing ary mampitombo ny lohan'izy ireo ary koa ny ezaka fananganana marika.
Mihoatra ny 50% amin'ireo orinasa dia efa mampiasa automatisation marketing, ary efa ho 70% ny ambiny no mikasa ny hampiasa azy io ao anatin'ny 6-12 volana ho avy. Marihina fa vitsy amin'ireo orinasa mampiasa automatisation marketing no efa niaina ny vokatra tadiavina. Betsaka amin'izy ireo no manao fahadisoana iraisana izay manimba ny fampielezan-keviny. Raha mikasa ny hampiasa Marketing Automation ho an'ny orinasa ianao dia sorohy ireo lesoka ireo mba hampitomboana ny mety hahombiazanao amin'ny teknolojia marketing farany:
Fividianana ny sehatra automatisation marketing diso
Tsy toy ny sehatra teknolojia marketing hafa toa ny marketing amin'ny mailaka na fitaovana media sosialy, ny automatisation marketing dia mitaky fampidirana akaiky ny rindrambaiko amin'ny kaonty media sosialy, tranokala, CRM misy ary teknolojia fanarahan-dia hafa. Tsy ny fitaovana mandeha ho azy rehetra dia atao mitovy amin'ny endri-javatra sy ny mifanentana. Orinasa maro no mividy ilay rindrambaiko miorina amin'ny endri-javatra sy ny tombony azo avy aminy fotsiny. Raha tsy mifanaraka amin'ny rafitra misy anao ilay rindrambaiko vaovao dia miafara amin'ny famoronana korontana sarotra vahana io.
Manaova fikarohana sy fitsapana demo alohan'ny hamaranana ny rindrambaiko mandeha ho azy ho an'ny orinasao. Ny rindranasa tsy mifanaraka dia hahatratra kely, na inona na inona tombony sy fiasa arosony.
Kalitaon'ny data an'ny mpanjifanao
Ny data dia ivon'ny automatisation marketing. Ny kalitaon'ny angon-drakitra tsy dia tsara dia mamokatra vokatra ratsy na inona na inona paikady ara-barotra tsara sy ny fampiharana mahomby. Efa ho ny 25% ny adiresy mailaka maty isan-taona. Midika izany fa ny tahiry ho an'ny id 10,000 dia tsy hanana afa-tsy Id 5625 ao anatin'ny fotoana fohy ao anatin'ny roa taona. Ireo id mailaka tsy mandeha amin'ny asany dia miteraka bouncing koa izay manelingelina ny lazan'ny mpizara mailaka.
Tsy maintsy mametraka mekanisma ianao amin'ny fanadiovana ny tahiry matetika. Raha tsy misy ny mekanika toy izany dia tsy ho azonao atao ny manamarina ny fiverenan'ny fampiasam-bola amin'ny automatisation marketing.
Ratsy kalitaon'ny atiny
Ny automatisation marketing dia tsy mandeha mitokana. Mila mamokatra atiny avo lenta ianao izay mampitombo ny fifandraisan'ny mpanjifa. Tsara ny manamarika fa raha te hahomby ny automatisation marketing dia ilaina ny fifandraisan'ny mpanjifa. Raha mampihatra automatique marketing ianao nefa tsy manandrana ezaka lehibe amin'ny famokarana atiny kalitao matetika, dia mety hiteraka fahavoazana tanteraka izany.
Zava-dehibe ny fanekena ny maha-zava-dehibe ny atiny ary manana tetika mahomby handaminana ny atiny kalitao matetika.
Fampiasana Sub-Optimal an'ny endri-javatra Platform
Anisan'ireo orinasa nanangana automatisation marketing, 10% ihany no nampiasa ny endrika rehetra an'ny rindrambaiko. Ny tanjona farany hampiasana automation dia ny fanafoanana ny fidiran'ny olombelona amin'ny asa miverimberina. Na izany aza, raha tsy ampiasaina tanteraka ilay rindrambaiko dia tsy hihena ny asa tanana ataon'ny sampana marketing. Raha ny tokony ho izy, ny fizotry ny varotra sy ny fanaovana tatitra dia ho lasa be hetika ary mora tratran'ny hadisoana azo sorohana.
Rehefa manapa-kevitra ny hampifangaro ny automatisation marketing ianao dia alao antoka fa mandalo fiofanana be dia be amin'ny fampiasana ny endri-javatra ilay rindrambaiko. Raha tsy manome fiofanana voalohany ny mpivarotra, dia tokony handany fotoana be eo amin'ny vavahadin-tseraseran'ny lozisialy ny mpikambana ao amin'ny ekipanao ary hahatakatra ny nuansa an'ilay vokatra.
Fiankinan-doha be loatra amin'ny mailaka
Ny automatisation marketing dia natomboka tamin'ny automatisation ny marketing mailaka. Saingy, amin'ny endriny ankehitriny, ny rindrambaiko dia nahitana saika fantsona nomerika rehetra. Na eo aza ny fananganana automatique marketing, raha mbola miantehitra amin'ny mailaka indrindra ianao hamoronana fitarihana, fotoana izao handinihana ny paikady marketing rehetra. Ampiasao ny haino aman-jery hafa toy ny sosialy, motera fikarohana ary tranokala hanomezana traikefa tsy misy tohiny ho an'ny mpanjifa amin'ny fanatanterahana ny tanjon'izy ireo. Ny fiankinan-doha amin'ny mailaka koa dia mety hanorisory ny mpanjifa hatramin'ny manomboka mankahala ny orinasanao.
Mba hahazoana tombony be indrindra amin'ny fampiasam-bola amin'ny automatisation marketing, mila ampidirinao ny fantsona rehetra ary ampiasao ny tanjaky ny fantsona rehetra hanovana ny vina ho mpanjifa.
Ny automatisation marketing dia mitaky famatsiam-bola voalohany eo amin'ny lafiny vola sy vola. Tsy majika rindrambaiko iray tsindry afaka mamaha ny fanamby amin'ny varotrao. Noho izany, alohan'ny handraisanao ny sainao hividy fitaovana automatique marketing, alao antoka fa maka fotoana ianao amin'ny fandaharam-potoana ankehitriny hampidirana azy tanteraka ao amin'ilay rafitra.
Amporisiho ny mpikambana ao amin'ny ekipanao hianatra zava-baovao ary hamolavola ny vahaolana arakaraka ny zavatra takinao. Amin'ny tranga sasany, azonao atao aza ny mangataka amin'ny mpivarotra hanamboatra fomba manokana mifanaraka amin'ny fepetra takinao manokana. Ny tanjona farany dia tokony hamafana ny fidiran'ny olombelona amin'ny hetsika marketing miverimberina ary hanodina ny tsingerin'ny fiainana.
Tags: automatiquetsyautomation marketinghadisoana amin'ny automatisation marketingfahadisoana
Dec 14, 2016 amin'ny 9: 47 AM
Lahatsoratra tena mahaliana. Faly aho fa voalazanao fa ny automatisation marketing dia ho an'ny orinasa amin'ny habe rehetra, satria angano iraisana fa ny goavana ihany no mahazo tombony amin'ny fitaovana mandeha ho azy.
Dec 15, 2016 ao amin'ny 5: PM PM
Maria, misaotra anao tamin'ny hevitrao
Manaiky tanteraka anao. Angano iraisana izay tsy maintsy "masiaka" !!!
Dec 28, 2016 amin'ny 5: 31 AM
Misaotra amin'ny torohevitra. Mikasa ny hanandrana automatisation marketing amin'ny taona vaovao aho ary misy zavatra betsaka tokony hianarana. Ahoana ny hevitrao momba ny sehatra, toy ny GetResponse? Ny olana amin'ireo orinasa kely maro dia ny tetibola ho an'ny rindrambaiko mandeha ho azy amin'ny marketing. Avy eo dia tonga ny fotoana ilaina amin'ny fiofanana.
Dec 31, 2016 amin'ny 1: 17 AM
Salama Edna, nanosika ahy hizara ny eritreritro momba ny fifidiananao sehatra Marketing Automation ianao. GetResponse dia sehatra matanjaka - saingy mila mahazo antoka ianao fa mamakafaka ny fomba hampiasanao azy sy ny loharano anananao mialoha. Nanoratra momba ireo aho lafin-javatra amin'ny fividianana sehatra Marketing Automation Eto.
Jan 24, 2017 ao amin'ny 7: 21 AM
Lahatsoratra tsara, Douglas! Tsy maintsy vakiana ho an'ny olona rehetra izay mieritreritra ny hividy sehatra automatique marketing. Misaotra anao nizara ny zavatra niainanao.
Jan 24, 2017 ao amin'ny 7: 19 AM
Edna, misaotra anao noho ny valinteninao. Tsy mbola nampiasa GetResponse mihitsy aho, ka raha ny tena izy, tsy afaka manome sosokevitra aho. Misy ny olana amin'ny teti-bola ho an'ireo orinasa kely, saingy azoko antoka fa milaza izany amin'ny ankamaroan'ny tranga. Ny fanontaniana momba ny fiofanana dia misy ihany koa fa ny ankamaroan'ny fitaovana na rindrambaiko manolotra fanandramana maimaimpoana ho anao hahazoana antoka raha mifanaraka amin'ny filàn'ny orinasanao ny serivisy.